अल्लु अर्जुनको फिल्म 'पुष्पा' को धमाकेदार कमाई, कति कमायो ? - ramechhapkhabar.com
अल्लु अर्जुनको फिल्म ‘पुष्पा’ को धमाकेदार कमाई, कति कमायो ?
पछिल्लो समय अल्लु अर्जुन अभिनित फिल्म ‘पुष्पा’ को निकै चर्चा छ । सुकुमारको निर्देशनमा बनेको यस फिल्मले शुरुवात देखि नै राम्रो कमाइ गरेको छ । सर्वाधिक कमाई गर्दै यो फिल्म कोरोना कालमा बढी कमाई गर्ने फिल्म पनि बनेको छ । यस फिल्मले फिल्मले २ दिनमै बक्स अफिसमा सय करोडको आँकडा पार गरेको छ ।
फिल्ममा अल्लु अर्जुनले रश्मिका मन्दनासँग जोडी बाधेँका छन् । शुक्रबार रिलिज भएको यस फिल्मले पहिलो दिन ७१ करोड कमाएको थियो भने अर्कोतिर फिल्मले ४५ करोड कमाएको थियो ।
यस्तै फिल्मले अमेरिकाको बक्स अफिसमा १.३० मिलियन डलर कमाएको छ । हिन्दी बक्स अफिसमा पुष्पाले पहिलो दिन ३ करोड र दोस्रो दिन ४ करोड कमाएको छ ।
काजोल र अजय देवगनले भाडामा दिए घर, एक वर्षपछि घरभाडा बढाइने !
पछिल्लो समय बलिउड अभिनेत्री कृति सेनन अमिताभ बच्चनको घरमा भाडामा बस्दै आएकी छन् । यस खबरपछि अभिनेत्री काजोल र अजय देवगनले पनि आफ्नो घर भाडामा दिएका खबर बाहिरिएको छ । काजोल–अजयले मोटो रकममा आफ्नो घर भाडामा दिएका हुन् ।
पवईस्थित अपार्टमेन्ट घर दिए भाडामा
मनी कन्ट्रोलको रिपोर्ट अनुसार काजोल र अजय देवगनले मुम्बईको पवईमा रहेको आफ्नो अपार्टमेन्ट घर भाडामा दिएका छन् । सार्वजनिक समाचार अनुसार ७ सय ७१ वर्ग फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त घरको भाडा मासिक ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
२१औं तलामा छ घर
पवईमा रहेको काजोल–अजयको अपार्टमेन्ट हिरानंदानी गार्डेनको एट्लान्टिक प्रोजेक्टको २१ औं तलामा छ । यस अपार्टमेन्टको लीज र इजाजतपत्र सम्झौता डिसेम्बर ३ मा दर्ता गरिएको थियो । उक्त घर भाडामा लिनका लागि भाडामा लिने व्यक्तिले तीन लाख रुपैयाँ सेक्युरिटी रकम पनि जम्मा गरेका दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक वर्षपछि भाडा बढाइने
उक्त घर भाडामा लिने ब्यक्तिले एक वर्षको लागि मासिक ९० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ । तर, एक वर्षपछि भाडा बढाइने बताइएको छ । त्यस्तै एक वर्षपछि भाडामा लिनेले मासिक रु ९६ हजार ७५० तिर्नु पर्नेछ ।
भव्य बंगलामा बस्छन् काजोल र अजय देवगन
अजय देवगन र काजोल आफ्ना छोराछोरीसँग बस्ने बंगलाको नाम शिवशक्ति राखिएको छ । यो बंगला उनीहरुले ६० करोडमा किनेका हुन् । यो घर ५९० स्क्वायर यार्डसमा फैलिएको छ ।